Bentley Geospatial Maamulaha, ilkaha - Geofumadas
Febraayo, 2009 Geospatial - GIS, Microstation-Bentley
The Maamulaha Bentley Geospatial, waa mid ka mid ah waxyaalaha Bentley ayaa aan awoodin in ay dheefshiido oo ku layliyo badan oo aan jirin si ay u sharxaan in ay fulinta ee mashruuca dhab ah. Ujeeddada qalabkani, oo ah isku-xirka Bentley Map waa dhammaan dhismaha mashruuca ee hore looga qabtay Juquraafiyaadka, sida:
Xaqiiji xidhiidhka xogta
Qeex qawaaniinta bukaanka
Samee miisaanka loo diro
Si kastaba ha noqotee, wax kastoo aan ka ogaanno Geographics ma aha mid aad u faa'iido leh, maadaama uu ka shaqeynayo Maamulaha Geospatial waa kala bar ka timaha timaha. Waxay leedahay awoodo badan, in kasta oo ay si qarsoodi ah ugu qarsoon tahay faraha mouse-ga; waxa qaali ah bilowga.
Faa'iidooyinka Maamulaha Geospatial.
Isbarbar dhigista wixii la sameeyey joqraafi, kuwani waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka:
Figurines, waxaan loola jeedaa, ka hor intaan badidooda la helin mabda 'graphic plugin.
Barnaamijka yar, ka hor inta aanad samayn farriinta loo baahan yahay oo leh code of files .ucf iyo dheeraad ah.
Tilmaamaha dhabta ah, hadda, calaamaduhu ma aha sifo CAD, sidii hore laakiin waxay gebi ahaan xiriir la leedahay sifooyinka
Miisaanka, sifooyinka waxay yeelan karaan hantida miisaanka, sidaa darteed waxaa lagu soo bandhigaa ama lagu qarsoon yahay miisaanka qallafsan
Talooyinka la xidhiidha sifooyinka, kuwani waa astaamaha dhismaha lagu qeexay abuurista walxaha, sida: markaan doonayo inaan abuuro axsaab wadada, amarka xadhigga ah ayaa si degdeg ah loo hawlgalaa; Tan waxaa loo yaqaan hababka.
map waxay leedahay xogta, waxaad u qeexi karaan sida badan oo sifooyinkaa ama xogta XML waa gudahood map-ka, si ay DGN ku jira xogta aan u baahan in lagugu xiro database ama sidecar a files.
Xiriir toos ah, marka la sameynayo ama dib loo furayo, ma jiraan wax khilaaf ah, sida horay u dhacday sababtoo ah xiriirku wuxuu abuuri karaa shay aan loo tixraacin xogta.
Nidaamkani waa mid aad u xoogan, maxaa dhacaya waa in ay adagtahay in la isticmaalo. Arrintaasi, Bentley Hotels waa codsi la dhisay Maamulaha Geospatial taas oo intaa dheer uu leeyahay macalin oo hagaya sharraxaadda hore.
Waxaan la soo dhawaaday by saaxiib maalinta kale oo i weydiiyay haddii aan sheegi karay ... dhowr post Waxaan rajeynayaa Irlo samaynaya, sababtoo ah hadda waxaan arkaya Bentley Map V8i oo aan u arkaa dib uma celin iska baahida loo qabo in dar Wizzard in ay xujo this. Hadda wixii ka dambeeya mawduuc ayaa kudhaca heerka guud.
Taariikh iyo macquul
Maamulaha Geospatial wuxuu ka soo baxaa qalabaynta xml ee Microstation V8.5 loo yaqaan XFM. Laga soo bilaabo Microstation V8.9, oo loo yaqaano XM Geographics, waxaa loo bedelay Khariidadda Bentley waana habka loo yaqaan V8i.
Mashruucyada aasaasiga ah ee Bentley ayaa qaabeeya qaabkan, sida uu sharraxay saaxiibkeen Martin:
Mashruuca (Mashruuca) ...........................
Tusaale: Mashruuca Cadastarada
Qaybaha (Qaybaha) ................. oo u dhiganta fasalada
Tusaale ahaan: Qaybaha: dhoobada, wadada, warshadaha, hydrological ...
Sifooyinka (Qaababka) ......................... u dhiganta maaddooyinka
Tusaale: xagasha wadada, xagjirnimada guryaha, buundada ...
Khariidadaha (Khariidadaha) ..................................... u dhiganta ardayda
Tusaale: Khariidadda HJ44-2D.cat, aagga kaynta ee Bfor, 0311.hid
Ka hor inta this waxaa la dhisay ka dhanka ah Geographics, hadda, qaabeynta oo dhan laga soocay Maamulaha Geospatial ah, oo kaliya ka dhismaha kooxda user Bentley Map. Sida furaha khariidadda xayeysiiska, soo bandhigida liiska qaybaha, dejinta sifooyinka, iyaga oo mideeya, ansixinta mawduucooda, falanqaynta lakabyada jimicsiga ... iwm.
Sidaa awgeed Maamulaha Geospatial wuxuu u egyahay qaabka qaab-dhismeedka "Geodatabase", oo keliya oo keligiis ah oo aan ku jirin waxkasta laakiin sifooyinka mashruuca oo idil.
Dhismaha Maamulaha Gobollada
Waxa aan haysano waa qaab geed oo ah qaabab kala duwan oo ay qaadeen mashruuc, oo faa'iido leh in hadda wax kasta laga sameeyo halkan.
Qalabaynta waxaa loo kala uruuriyaa:
Astaamaha loogu talagalay dhammaan dadka isticmaala guud ahaan (Dhamaan dadka isticmaala)
Dhammaan kuwan waa jeneraalada mashruuca.
ka qaybaha Waxay ku jiraan heerkaan oo aan ku jirin isticmaalaha qaaska ah.
Heerarka topology iyo qaabeynta of xogta taas oo mashruucaan ku xiran yahay.
Shaqada goobta adeegsadaha hadda
Kuwani waxay gaar u yihiin goobta shaqada loo yaqaan user, ama waxa aan ugu yeeray ka hor inta; Si ka duwan jumladaha guud, waxay ku jiri karaan:
-waxbarashooyin iyo habab gaar ah oo loogu talagalay wax kasta. Waxaad sidoo kale qeexi kartaa sifooyinka muuqaalka ah ee laga yaabo inay isticmaalaan.
-Archives, sida abuur ama maktabado la wadaago
-Macros iyo qalabka isdhexgalka loogu talagalay isticmaalaha.
Dhamaan tani waxay suurtogal ka dhigtay Geographics iyada oo loo marayo faylka .ucf, taas oo u oggolaaneysa in ay si toos ah u furto Juqraafi ah mashruuca la qeexay, iyada oo qalabka lagama maarmaanka ah ... laakiin waxaa la sameeyey lambarka saafiga ah.
Qaamuuska nidaamyada isuduwidda
Waa kuwan qaababka kala duwan ee isku-xirnaanta nidaamka
Ilaha xogta qarsoodiga ah
Halkaan waxaa lagu qeexay habka loo isticmaalo macluumaadka xayeysiiska ah ee loo maro Oracle, iyo sidoo kale Index oo ah feylka oo ku jira tusmada muuqaalka dhammaan khariidooyinka diiwaangashan ee database-ka.
Qaab-dhismeedka mashruuca ayaa isku mid ah haddii mashruuca laga soo dhoofiyo Juquraafiga laakiin dhismaha isbeddelaya haddii ay ka dhisto xoqid:
Laga soo bilaabo halkan waxaa ku habboon inaad xasuusato qaar ka mid ah faylasha xiisaha leh:
idx, halkaas oo faylka index iyo goobaha lagu kaydiyo
abuur, waa meesha feylka lagu kaydiyo
sql, raadinta halkan ayaa lagu keydiyaa
Tlr, halkan waa layiraha topoloji
gafka, faylasha shaqada
Nasiib daro ma garanayo waxa la soo gabagabeynayo dhamaadka boostadan, haddii qof uu iibsado Bentley Map oo uusan ogayn sida loo isticmaalo Maamulaha Geospatial ... ma caawineyso. Maamulaha Geospatial waa mid aad u sigaar cabbayaasha isticmaala ee ka bilowda GIS.
Laakiin ma aha dembi ah Bentley, ciyaaraha waa mid aad u xoogan, oo leh .NET waxaad samayn kartaa cajaa'ib laakiin sida Geographics, adag tahay in aad
socodka la'aan mega-caawin, waxaa jira tusaalooyin la socda barnaamijka, horayba hub ahaan. Dembigu waa wax macquul ah oo wax ku ool ah; sida muuqaalka, fiidiyow aad u fiican oo mashruuc dhamaystiran la dhisay kadibna la quudiyo, loo shaqeeyo loona dhoofiyo Geoweb Publisher. Sidaa daraadeed cidda fulineysa waxay ogtahay jidka loo maro.
Waan ogahay, waa wax badan oo la weydiiyo laakiin taasi waa waxa aan nahay, macaamiisha aan ku weydiino. Oh, waan ilowday. Isbaanish fadlan.
Fariimaha kale ee la xiriira:
Post Previous«Previous Barnaamijka aad jeceshahay waa inuu dhinto
Post Next Aniga waxaan ahay Latin America Congress of ValorizationNext »